Amin'ny firy taona no azo fandroana saka, ary ahoana no fandroana? | Noti saka
Ny saka dia mandany ampahany betsaka amin'ny fotoanan'izy ireo amin'ny fikolokoloana ny tenany: aorian'ny fisakafoanana, aorian'ny torimaso, rehefa avy nandeha tongotra, taorian'ny fitsaharana,… tsara, rehefa avy nanao zavatra. Na dia tsikaritra ho hafahafa aza izy ireo dia hanadio ny tenany ihany koa. Biby izy ireo tena madio amin'ny natiora, satria any an'ala, ny biby iray fofona be loatra dia mety ho rembin'ny biby mpiremby. Fantatsika. Ny lehilahy volom-borona ao an-trano dia tsy mila miaro tena amin'ny olon-kafa, fa kely ny azo atao manoloana ny faniriana voajanahary.
Indraindray, tsy hanana safidy isika afa-tsy ny fikarakarana manokana ny fahadiovanao, ka holazaiko aminao Manomboka amin'ny firy taona no azo fandroana saka sy ny fomba fanaovana azy mba tsy hiteraka adin-tsaina na karazana tsy fahazoana aina hafa.
1 Rahoviana no handro saka
2 Ahoana ny fandroana saka?
2.1 Alohan'ny handroanao ny saka
2.2 Mandro ny saka
2.2.1 Dingana manaraka
2.3 Aorian'ny fandroana
3 Mila mandro ve ny saka?
4 Ahoana ny fandroana saka izay tsy zatra mandro?
Rahoviana no handro saka
Ny saka dia afaka manomboka mandro amin'ny 2 volana, na izany aza tsara kokoa ny miandry telo volana rehefa manana ny vaksiny voalohany farafaharatsiny. Ny fanaovana an'io taloha dia mety manimba ny biby, satria mety hanimba ny ainy mihitsy aza isika. Araka izany, rehefa feno farafahakeliny 8 herinandro izy ireo dia azonao atao ny mampazatra azy ireo tsikelikely amin'ny trano fidiovana. Amin'ny fotoana tsy tokony hanery azy hanao zavatra, satria ny fanaovana izany dia hiafara amin'ny fampifangaroana ny fandroana (ary tsy ny kabine ihany, fa ny fidiovana koa), miaraka amin'ny zavatra ratsy (stress).
Liana be ny zanak'alika, ka tsy ho sarotra aminao ny hahatsapa ho manakaiky ny rano. Mazava ho azy, alohan'ny hametrahana azy ao anaty kovetabe fandroana dia manoro hevitra anao aho fa amin'ny fotoana voalohany handroanao azy amin'ny fandroana zaza na amin'ny lovia izay natsipinao tao tsy mihoatra ny rano 2cm mafana. Mitenena moramora, milamina, ary ataovy izay hahazoana antoka fa tsy mahazo sombin-tsofina amin'ny tarehiny na ny sofiny. Avy eo ianao dia tsy mila manala azy amin'ny rano fotsiny ary manadio azy amin'ny lamba famaohana.
Tsy sarotra ny mandro saka, fa sarotra ny mampankafy ny saka olon-dehibe amin'ny fandroana. Ka raha mikasa ny handro azy indraindray ianao dia vao manomboka ianao (tadidio fa tsy alohan'ny valo herinandro akory), kely kokoa ny vidiny aminao.
Ahoana ny fandroana saka?
Na dia biby madio be aza ny saka malalantsika, indraindray isika dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manome azy tanana, indrindra raha marary izy, maloto be na raha, noho ny fahanterana dia tsy tadidiny intsony ny fikarakarana. ny fahadiovany. Fa, ahoana no anaovana azy?
Alohan'ny handroanao ny saka
Alohan'ny handroanao ny saka (rehefa mbola tsy nanao an'izany ianao) dia tokony ho eo am-pelatananao ny zava-drehetra mba tsy hanadinoanao na inona na inona. Rehefa eo am-pelatananao ny zava-drehetra, dia:
Ataovy ao anaty koveta plastika lehibe io na hilentika miaraka amina tsihy tsy slip.
Mampiasà shampooing manokana ho an'ny saka tsy misy akora simika na ranomanitra.
Aza mampiasa afa-tsy saka saka raha tsy ilaina izany, aza mampiasa olombelona mihitsy.
Mampiasà servieta na roa hanamainana azy.
Manana borosy mora ampiasaina ihany koa hanala fatotra.
Mandro ny saka
Raha mila mandro ny saka ianao na dia tsy tiany aza, voalohany, dia mila miaritra faharetana ianao. Ho an'ny efitra fandroana dia tadidio ity manaraka ity:
Fenoy ny rano fandroana amin'ny rano matimaty izay tsy mafana
Atsofohy miadana ao anaty rano ny sakao ary aza fenofina be loatra sao tsy mitebiteby ny saka
Omeo dera sy toky be foana ny sakao amin'ny fotoana rehetra. Mety manampy be ny fitsaboana.
Ataovy amina olona atokisana hafa ity hitana ny lohan'ny saka sy hanome toky azy raha ilaina izany.
Ny tsara indrindra dia manomboka zatra ho saka; Amin'izany, rehefa antitra izy, dia tsy ho hafahafa aminy loatra ary mety hiafarany mihitsy aza ny hitia azy. Saingy tsy hamitaka anao aho: ny fotoana vitsivitsy voalohany dia ny traikefa mety hahakivy anao sy ny anao ary ny zavatra voalohany hatolotro anao dia ny hitonianao hatrany. Tsy hanampy anao mihitsy ny nerves.
Rehefa milamina ianao, fenoy vilia iray teo aloha - izay nametrahantsika ny akanjo rehefa nesorintsika avy tao amin'ny milina fanasan-damba- misy rano mafana kely, izay manodidina ny 37ºC. Zava-dehibe ny tsy hamenoana azy rehetra: ny manarona ny tongotra fotsiny dia mihoatra noho ny ampy.
Ny zavatra manaraka tokony hataonao dia antsoy ny saka miaraka am-peo am-pifaliana tokoa ka tsy hisalasala manatona anao izy. Satria biby marani-tsaina tokoa izy io, azo antoka fa hitodika raha vantany vao mahita ilay lovia misy rano, fa noho izany dia tsy maintsy hatolotrao hitsaboana raha vao hitanao miditra ao amin'ny trano fidiovana izy. Aoriana, maka lamba famaohana kely ary mandena azy avy eo mamafa azy amin'ny vatan'ilay biby (Fantatro. Ho very rano ny tany. Nefa tsy maintsy mandeha tsikelikely ianao mba tsy hatahotra).
Sorohy ny hatoka sy ny ampahany amin'ny lamosina izay teraka ny rambony. Azo antoka fa ho tiany io ary hahatonga azy hahatsapa ho tsara kokoa, zavatra izay hanampy anao hahita fa tsy misy zava-dratsy mitranga.
Raha hitanao fa mahazo aina izy io, Azonao atao ny mandray azy moramora ary mametraka azy ao anaty lovia mba hamaranana ny fanadiovana ny loha -Atao antoka fa tsy misy shampooing miditra amin'ny maso, orona na sofina-, tongotra sy rambo. Aorian'izay dia maina ny servieta, kosohy amin'ny borosy karatra na amin'ny Furminator, izay borosy manala volo efa ho 100%. Aza adino ny manome azy saka hafa raha vantany vao milamina izy. Raha tena tsy mahazo aina sy mihenjana izy, atsobaho maina ary manandrama indray afaka andro vitsivitsy.
Rehefa avy nandro ny saka ianao dia tsy mila manao azy tsy tapaka ary mihena kokoa raha tsy tian'ny saka ianao. Ny zavatra tsara indrindra dia raha maloto izy dia diovinao amin'ny vokatra manokana fa tsy mila mandro ianao mba tsy hiteraka adin-tsaina na fanahiana tsy ilaina.
Mila mandro ve ny saka?
Amin'ity fotoana ity dia mety hanontany tena ianao raha tena mila mandro ny saka anao na afaka mandeha tsy mandro azy ianao. Raha ny tena izy dia tsy mila mandro ny saka, raha tsy hoe maloto be loatra. Fa raha hatramin'ny fahazazanao dia tsy nahazatra azy ireo ny fandroana, dia tsara kokoa ny tsy manao azy. Raha maloto izy dia misy mamafa manokana ho an'ny saka izay hanampy anao hitandrina ny fahadiovany.
Raha sendra manana loto be ny saka anao ka tsy afaka manasa tena izy na tsy azo atao ny manadio azy tsara amin'ny famafana manokana hanasana saka, dia amin'izay vao mety ho hevitra tsara ny fandroana.
Ahoana ny fandroana saka izay tsy zatra mandro?
Ny ankamaroan'ny saka dia tsy tia mandro ary mety hahakivy tokoa ho azy ireo izanyindrindra rehefa mbola tsy nandro izy ireo taloha. Araka ny efa nolazainay, raha afaka manadio ny faritra mitoka-monina amin'ny loto ianao fa tsy mandena ny vatana iray manontolo.
Fa raha mila manasa azy ianao dia zava-dehibe ny hahafantaranao ny fanaovana azy mba ho traikefa ahazoana aina ho anao roa. Na dia nifandray tamina poizina poizina aza ny saka anao, dia ny zavatra voalohany tsy maintsy hataonao dia ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby.
Raha matahotra ny saka dia hanandrana hanakorontana na hanaikitra anao, raha sendra ajanony ny fandroana azy ary miresaha amin'ny mpitsabo biby mba hisafidy fomba hafa hanasana azy. Mety hanome soso-kevitra amin'ny mpitaiza za-draharaha amin'ny saka mitebiteby izy. afaka mandro ny saka ho anao izy.
Zava-dehibe ny hieritreretanao ny fahasambaran'ny saka alohan'ny fotoana rehetra alohan'ny hanadiovana ny loto. Aza avela hanana traikefa ratsy amin'ny fandroana ny saka anao Na avy eo, tsy ho azonao atao mihitsy ny manantona azy hanadio azy rehefa tena ilainy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Amin'ny taona firy no azo fandroana saka
Sofia Cáceres dia hoy izy:
Misaotra betsaka 😀 manana saka aho ary tsy fantatro hoe firy taona no handroana azy, 3 volana io, mandritra ny fiainako rehetra tiako ilay izy <3
Mamaly an'i Sofía Cáceres
Piero mendoza dia hoy izy:
Inona no hitranga raha handro azy io aloha kokoa noho ny torolàlana aho?
Valiny tamin'i Piero Mendoza
Raha mahazo aina ny mari-pana ao amin'ny trano fidiovana ary ataonao maina ny saka dia tsy misy zavatra tokony hitranga.
Nahita saka aho teny an-dalana, tena mbola kely, 3 herinandro teo ho eo, ary nandro aho 2 andro lasa izay dia marary sasaka, ary omeko fanafody, tsy tiako ho faty izy? Ny zavatra hafa azoko atao ho an'ny saka, torohevitra vitsivitsy
Manome azy fanafody natolotry ny mpitsabo ve ianao? Manontany anao aho satria tsy mety ny manasitrana saka iray, satria mety ho ratsy kokoa izany.
Ataovy mafana izy io, miaraka amin'ny lamba firakotra. Raha manana tavoahangy misy insulated ianao dia fenoy rano mangotraka, fonosina lamba, ary apetraho eo amin'ny farafaran'ny saka.
Fahano sakafo zanany malemy izy; raha tsy mihinana izy dia omeo ity fangaro manaraka ity:
- 1 / 4l ronono iray manontolo (tsara kokoa ny lactose maimaim-poana)
- crème mavesatra 1 sotrokely
- yolk atody 1
Salama ahoana ny zavatra? Manana kittens roa aho, samy mpirahalahy, izay vao nivadika telo volana androany, ary efa nanao ny vaksininy voalohany iray volana lasa izay hoy aho. Te hitondra azy ireo handro aho satria manana parasy betsaka, azo atao ve? Sa mila miandry azy ireo hahazo ny sary faharoa? Misaotra!
Eny, azonao atao ny manasa azy ireo hanala azy ireo. Azonao atao ihany koa ny mitsabo azy ireo amin'ny antiparasite ho an'ny zanak'alika, toy ny spray Frontline, mitandrina fa tsy mifandray amin'ny maso, sofina na orona.
Salama famonjena avy eny an-dalambe zanak'omby miaraka amin'ny alika kely telo sahabo ho 1 volana, manana parasy maro izy ireo, misy tolo-kevitra hanesorana azy ireo ve?
Azonao atao ny manasa azy ireo amin'ny rano matimaty, mitazona ny varavaran'ny trano fidiovana ary mihidy hatrany. Mampiasà shampooing saka (mety hanimba azy ireo ny olombelona). Avy eo, apetaho amin'ny lamba famaohana izy ireo ary ataovy mafana hatrany amin'ny lamba firakotra. Raha manana tavoahangy mafana ianao, tonga lafatra: fenoy rano mangotraka izy ary fonosina lamba famaohana, mba tsy hirehitra ny saka. Tavoahangy plastika mety mandeha ihany koa.
Na izany na tsy izany, azonao atao ihany koa ny manala azy ireo amin'ny alàlan'ny tsiranoka antiparasite Frontline, izay ho hitanao amidy any amin'ny tobim-pahasalamana sy fivarotana biby. Mazava ho azy, tsy mila mifandray amin'ny maso, orona, vava na sofina (tarehy anatiny) izy io.
Eny, azonao atao ny mampandro azy amin'ny shampooing saka, fa arindrohy ny efitrano, manafana ary avy eo maina tsara.
Yolanda marin dia hoy izy:
Salama manana zanak'omby 2 volana eo ho eo aho, afaka manasa azy sahady aho na mila miandry 3 volana .. Misaotra betsaka
Valiny tamin'i Yolanda Marin
Eny, azonao atao ny mandro azy izao, fa ataovy ao anaty efitrano mafana ary avy eo maina tsara.
Salama, herintaona mahery kely lasa izay dia nitazona saka mandehandeha aho, be fitiavana izy nefa tsy namela ny tenany ho tratra ary tiany ho any ivelany bebe kokoa ... Ankehitriny dia naka alika kely roa volana aho sy ilay saro-piaro indrindra i zokiny indrindra. Nifamaly izy ireo, tsy maintsy ataoko misaraka amin'ny efitrano samihafa izy ireo, fantatro fa tsy tsara ny manakana azy ireo tsy hivory fa matahotra aho fa handratra azy izany ... teo aloha izy niady miaraka amin'ny saka olon-dehibe iray hafa izay namakivaky ny zaridaina ... mila torohevitra aho ... sarotra be amiko izany!
Tokony hanana faharetana isika.
En Ity lahatsoratra ity ny fomba fanolorana saka roa dia hazavaina 🙂
Dante valverde dia hoy izy:
Salama, salama, manana zanak'ondry roa aho izay iray volana izao ary nomenay azy ireo ny sakafon'ny zanany voalohany. Ny fanontaniako dia hoe ohatrinona no tokony homeko azy ireo. Ary koa amin'ny maraina dia omentsika lecje izy aorian'ny sakafo adiny telo ary amin'ny maraina koa matory ronono. Manao tsara toa izao ve isika ?? Misaotra betsaka tamin'ny valinteninao. fiarahabana
Valiny tamin'i Dante Valverde
Mandritra ny iray volana dia mihinana kely isaky ny mandeha izy ireo, manodidina ny 15-20g isaky ny manompo bebe kokoa na latsaka. Tokony ho azonao antoka fa afa-po tsara izy ireo.
Eny, mikarakara azy ireo tsara ianao 🙂, fa atombohy kely ny fampidirana ny rano. Ohatra, tsy tokony hanome azy ronono amin'ny alina, fa omeo rano, na alemana ny sakafony - indray mandeha isan'andro - amin'ny rano.
Salama, manana kittens 2 aho 27 andro na mihoatra, nandao azy ireo ny saka renim-pianakaviana tamin'ny fotoana nahaterahany ary noraisiko tamin'ny vadiko izy ireo, ny olana dia manana sery izy ary tsy te hisotro ronono, nanao hadisoana tamin'ny fandroana ny vadiko izy ireo ary novakiako fa tsy tokony hatao mandritra ny 8 herinandro, inona no azoko atao? nandoa fotoana vitsivitsy koa izy, noho ny valinteninao, misaotra
Valiny tamin'i Gladys
Amin'io taona io dia azonao atao ny manomboka manome azy sakafo lena ho an'ny kittens, voatetika tsara. Mametraka kely ao am-bavany ianao, manidy azy moramora nefa hentitra (tsy handratra azy, miziriziry aho), ary hitelina azy ho azy.
Satria marefo dia marefo izany dia ampirisihiko hitondra izany any amin'ny mpitsabo (tsy izaho) faran'izay haingana ho an'ireo mandoa.
Salama, salama, manana fanontaniana aho, manana saka kely eo amin'ny 2 volana eo ho eo aho, azo atao ve ny mandro azy? Na dia mbola tsy nomeko azy aza ilay vaksininy, ny zavatra hafa dia ny nanombohako nanome azy efa ho herinandro lasa izay no nikarakarako alika kely sy rano, indraindray dia mandoa izy, nefa mbola tsy milamina ihany izy. ho ratsy ve izany? misaotra betsaka ...
Mikasika ny fanontaniana voalohany dia azonao atao ny manasa azy raha mbola mitandrina ianao mba tsy hangatsiaka; izany hoe, apetaho ny fanafanana, mitazona ny varavaran'ny trano fidiovana rehefa mandro ianao ary avy eo maina tsara.
Ary ny an'ny faharoa kosa, ampirisihiko hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby raha sanatria. Mety ho ara-dalàna izany, fa ny matihanina ihany no afaka milaza aminao (tsy izaho).
Sahan'i Stephany dia hoy izy:
Amin'ny ora firy amin'ny andro no ahafahako mandro azy?
Valiny tamin'i Stephany Campos
Isaky ny mila ianao, rehefa milamina dia avy eo maina tsara. Ny hany zavatra tsy maintsy tadidinao dia ny tsy mila mandro azy avy hatrany aorian'ny fandroana azy; avelao handalo 2h farafaharatsiny.
Tantara ny voamadinika sakafo azo omena saka saka don taona ary impiry isan'andro?
Mamaly an'i zulma
Ny tsara indrindra dia ny mamela ny feeder ho feno 🙂
Ny saka dia mihinana 4-6 isan`andro, ary ny olana (tebiteby) dia mety hitranga rehefa mametraka fandaharam-pisakafoanana ho azy ireo ny olombelona.
Ny vola homena arakaraka ny lanjany dia aseho amin'ny kitapo, saingy 200g eo ho eo matetika raha 4-5kg ny lanjany.
Salama! Nanangana kitten 5 semaine aho fa ny parasy no adala 🙁 azoko atao ve ny mandro azy sa tokony hiandry eny na eny amin'ny vaksiny voalohany? Ary ny fanontaniana iray hafa angamba somary adaladala, fa tsy mba nanana saka ve aho, afaka manapaka kely ny hohony na mametraka azy kely? Misaotra mialoha ary miarahaba avy any Arzantina?
Amin'io taona io dia azonao atao ny manontany ny dokoteranao momba ny antiparasitics ho an'ny zaza. Ohatra, ny spray Frontline ho an'ny saka dia azo ampiasaina raha vao andro vitsivitsy monja izy ireo.
Mikasika ny fantsika, eny, azonao atao ny manapaka kely azy ireo, fa raha manana fisalasalana amin'ny fomba fanaovana izany ianao dia manatona mpitsabo biby. Na izany na tsy izany dia tokony tadidinao fa ny ampahany fotsy ihany no azo tapahina.